Qisadii Sarah iyo boqorkii daalimka ahaa - Qisooyin uu Nebi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay Q/1aad - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Qisadii Sarah iyo boqorkii daalimka ahaa – Qisooyin uu Nebi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay Q/1aad
Assalamu Calaykum Dhamaantiin
Qisooyinku waa hab qofka iyo umadaha lagu tarbiyadeeyo. Waa qaab uu nabigu (csw) uu ku tarbiyadayn jiray asxaabtiisa.
Barmaamijkani waa barmaaijkii koowaad ee barmaamijyo silsilad qisooyin ah oo aan ugu talagalay bishan Ramadaanta. Waxa aan silsiladan ugu magac darnay “Qisooyin uu nabi Maxamed (calyhi salaatu wa salaam) ka sheekeeyay. Barnaamijkan koowaad waxa mawduuciisu waa :
Qisooyin uu nabi Maxamed (CSW) ka sheekeeyay (1) – Qisadii Sarah iyo boqorkii daalimka ahaa
Fadlan sii fidiya si aad ajarka u wadaagtaan.